Zwift | October 2021
Isi > Zwift
nseta ihuenyo zwift
Nseta ihuenyo Zwift - otu esi edozi
Kedu ka m ga-esi nweta nseta ihuenyo na Zwift? Iji nweta nseta ihuenyo site na ngwa Zwift Mobile Link, pịa bọtịnụ 'Snapshot' na ala nke ihuenyo bọtịnụ iji were snapshots. Dabere na ikikere ngwa moble gị, screenshots ndị a ga-ada na foto gị 'Gallery' (na gam akporo) ma ọ bụ igwefoto igwefoto gị (na iOS).
Zwift agbụrụ - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ụdị agbụrụ Zwift? Mpempe ZwiftA: 4+ W / kg.B: 3.9-3.2 W / kg.C: 3.1-2.5 W / kg.D: 2.4-1 W / kg.E: Mepee W / kg.16. 2020.
zwift ịkwọ ụgbọ mmiri
Zwift n'ụgbọ - ihe ngwọta na-
Enwere Zwift maka ịkwọ ụgbọ mmiri? Ọ bụrụ na ịmalite ịkwọ ụgbọ mmiri, ị ga-ahụ ọkụ eletrik gị na ngwaọrụ iOS. Na ngwaọrụ Zwift gị, jikọọ na PainSled / RowedBiker iOS ngwaọrụ gị dị ka igwe ike gị. I nwekwara ike ijikọ sensọ ndị ọzọ na ngwaọrụ Zwift gị (dịka ihe nyocha gị). Nweta Zwifting! 30. 2021.
si na azụ ọzọ zwift
Out and back again zwift - ihe ngwọta bara uru
Ogologo oge ole ka ọ dị na azụ ọzọ na Zwift? 26.4 kilomita
Nsonaazụ agbụrụ Zwift - azịza nke usoro ihe omume
Zwift ọ na-egosi nsonaazụ agbụrụ? A: Nnukwu ajụjụ! ZwiftPower na-ewe data arụmọrụ site na Zwift ma nwee ụdị agbụrụ sitere na mmemme mmadụ.
Alpe du zwift - otu esi edozi
Mgbe Alpe du Zwift? Satọde 21.11.2020, 7 elekere 23.11.2020
nkebi ike mita zwift
Ozo ike mita zwift - azịza dị mfe maka ajụjụ
Nzọụkwụ ike mita dakọtara na Zwift? Ihe ngosi ike nke Zwift na-enye ya ohere ijikwa ọnọdụ ERG site na data sitere na mita ike gị. Ihe ị ga - eme bụ ijikọ ma igwe ike gị na onye na - azụzi ihe na - achịkwa nke dabara na Zwift.
zwift ụzọ york
Zwift new york routes - arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Kedu ụzọ ndị ị nwere ike ịnya na Zwift? Wzọ Zwift na Cyzọ CyclingMakuri Islands.France.Paris.Watopia.Richmond.
okirikiri igbo zwift
Zwift jungle - ngwọta na-adịgide adịgide
Ogologo oge ole ka sekit nke ọhịa dị na Zwift? 500m
zwift ngwa ngwa
Zwift Companion ngwa - ajụjụ nkịtị
Ndi na-Zwift Companion App? Zwift Companion App bụ ezigbo enyi na Zwift. Jikọta ya na kọmputa gị karịa otu netwọk Wifi ahụ ma jiri ya dị ka onye njikwa egwuregwu Zwift mgbe ị na-agba ịnyịnya. SCL SC ihuenyo. Na nlele lee ihe omume na nso nso a na ndepụta gi, atumatu atumatu nzuko, ihe ndi n’abia na agam n’ihu nke gi.
kacha zwift ntọlite
Ultimate zwift setup - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ụzọ dị ọnụ ala iji jiri Zwift? Nhọrọ kachasị ọnụ ala maka ịnya na Zwift na-eji ọkọlọtọ ọkọlọtọ ọkọlọtọ jikọtara ya na ọsọ ọsọ na cadence na-ejikọ Zwift site na ANT + ma ọ bụ bluetooth. Mgbe ị na-eji ọkọlọtọ turbo ọkọlọtọ nke na-anaghị ebunye data na ọsọ na cadence ihe mmetụta, gị na-egwu egwuregwu na-eme site na mebere watts akpọ zPower.
zwift ka esi agbanwe jersey
Zwift esi gbanwee jersey - azịza dị mfe nye ajụjụ
Kedu ka ị ga-esi nweta ejiji Zwift omenala? Ka ọ dị ugbu a, naanị otu ụzọ iji nweta ihe eji eme egwuregwu n'ime egwuregwu bụ ime ka ZwiftHQ kwenye itinye oge onye na-ese ihe iji mee ka ọ mee. Dabere na Wes Salmon na Zwiftcast nke izu a, imepụta ihe osise a bụ ihe nrụsi.
zwift okporo uzo
Zwift road to mkpọmkpọ ebe - otu esi edozi
Ogologo oge ole ka okporo ụzọ nke mkpọmkpọ ebe Zwift dị? 2.8 kilomita // 4.5km ogologo, -3% nkezi ọkwa. 1 2019.
okirikiri powerync zwift
Cycleops powersync zwift - mmeghachi omume na okwu a
Nwere ike iji onye nkuzi ọ bụla na Zwift? Kedu akụrụngwa m kwesịrị iji kpọọ Zwift? Agbanyeghị, ịkwesighi ịpụpụ na onye na-azụ turbo dị oke ọnụ iji nwee ike iji Zwift. Na ọkwa kachasị dị oke mkpa ị nwere ike iji onye ọ bụla turbo trainer jikọtara ya na ANT + ma ọ bụ ihe ọsọ ọsọ Bluetooth (ọ bụ ezie na usoro ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma na mita ike).
Zwift inc. - esi ekpebi
Kedu ụlọ ọrụ nwere Zwift? Zwift Inc.
bu zwift kwesiri ya
Ndi zwift kwesiri ya - otu esi edozi
Zwift ọ bara uru ego ahụ? Can nwere ike ịhọrọ turbo dị ọnụ ala wee zụta ihe mmetụta nke ga-enye Zwift ike gị na ọsọ / cadence na ngwa ahụ, mana ọ na-atọ ụtọ karịa na onye na-enye gị ọzụzụ ma m ga-asị na ọ bara uru maka mmezi ma ọ bụrụ na mmefu ego gị nwere ike ịgbatị nke ahụ.
zwift na igwe onyonyo
Zwift na igwe onyonyo - otu esi eme
Ego ole ka Zwift na-eri kwa ọnwa? 15 euro
dị ọnụ ala smart ọzụzụ maka zwift
Dị ọnụ ala smart ọzụzụ maka zwift - keukwu akwụkwọ
Kedu onye na-azụ ọzụzụ dị ọnụ ala karịa? E nwere naanị otu onye na-azụ ọzụzụ dị oke ọnụ ahịa na ahịa, nke ahụ bụ Tacx Flow Smart. KICKR Snap nwere ikike dị ike karị, ụgbọ elu nke na-ebuwanye ibu nke na-enye ọfụma ịnya ịnya ka mma na arụ ọrụ ka mma, yana usoro ziri ezi ziri ezi gafee osisi. 06.11.2020
zwift otu inyinya
Zwift group agafe - otu esi enweta
Kedu otu ụgbọ ịnyịnya na-arụ ọrụ na Zwift? Họrọ aha na ndepụta onye na-agba ma see bọtịnụ sonyere. Dịrị njikere ịmalite pedal ozugbo ngwa ngwa avatar gị pụtara! Zwift ga - edokwara gị n'akụkụ onye na-agba nke ọzọ maka sekọnd ole ma ole ibili ọsọ. Soro mmemme a haziri ahazi dị ka otu ịgba ọsọ, agbụrụ, ma ọ bụ mgbatị otu, ma mee ka ndị enyi gị sonye na ya. 4 2020.